China abicah Coins Purse & Abicah iingxowa mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iingqekembe nezinye izinto zoncedo zibalulekile kodwa akukho lula ukuzifumana, kwaye azicocekanga ukuzibeka ngqo ezingxoweni zakho, ezinye ziya kwenzakala okanye zikrwitshelwe ukuzidibanisa.
Iingqekembe nezinye izinto zoncedo zibalulekile kodwa akukho lula ukuzifumana, kwaye azicocekanga ukuzibeka ngqo ezingxoweni zakho, ezinye ziya kwenzakala okanye zikrwitshelwe ukuzidibanisa. Inkqubo ye-amatyala ezinto abicahngobukhulu obuncinci kunye neemilo ezintle ezintle zezona zinto zisombulula iingxaki. Zenziwe kwimathiriyeli ekumgangatho ophezulu yesilicone kunye nokutsalwa ngoziphu okanye ukuvalwa kwesinyithi, kunokubamba iinkozo zemali kunye nezixhobo ngokwahlukeneyo. Ukwenza iimeko ngobukhulu obukhulu njengebhegi yesandla, ziingxowa zesilicone ezisetyenziswa ngokufanelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla. Imibala yangasemva kunye nemibala yeelogo ezithandekayo zinokutshatisa imibala yePMS ngokweemfuno zabathengi, kwaye babhengeze izimvo kunye neengcinga zabaxhasi bengxowa mali. Iimeko zeengqekembe zesilicone kunye neengxowa ze-silicone zomelele, zomelele ngokwaneleyo ukuba zisetyenziswe ixesha elide. Azinyangeki ngamanzi ukuze zisetyenziswe kwimozulu enethayo, ukuthintela iimoto zakho, indlu yakho kunye nezinye iindawo ukuba zimanzi. Iingxowa ze-silicone zi-Eco-friendly kunye nokusingqongileyo ukugqithisa imigangatho yokuvavanya evela e-USA okanye eYurophu, ngoko ingasetyenziselwa ukuphatha ukutya kunye ne-condiments.
Designs: 2D, iilogo 3D ngaphandle, iimilo ungenziwa ngemfuneko
Ubukhulu: Ngaphantsi kwe-100 mm, okanye yenziwe ngokwezifiso
Imibala: Unokutshatisa imibala yePMS, okanye ulandele imfuno yakho.
Ukuncamathisela: Ukuvalwa kwentsimbi, amakhonkco okutsiba, iiKeyings, izitshixo, amagwegwe okanye ukulandela
Egqithileyo Keychains abicah
Okulandelayo: Ukuvaleka kwesiciko seNdebe yeSilicone
Iingqekembe zeengxowa zemali
I-Silicone Cartoon Coin Isikhwama
amatyala ezinto abicah
Ingxowa yeSilicone Coin
Iingxowa zemali zeSilicone
I-Silicone Cute Coin Purse